မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး-အ ပိုင်း (၇) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး-အ ပိုင်း (၇)
မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး-အ ပိုင်း (၇)
Posted by aye.kk on Jun 20, 2012 in My Dear Diary | 11 comments
စိတ် ညစ် စ ရာ စ ကား တွေ ဆို ရင် ……
ဆက် မ ပြော နဲ ့တော့ ဦး မ ကြား ချင် တော့ ဘူး ဟု ဆို ပါ သည် ။
က ရ ဝိတ် ဟို တယ် မှ ပြန် ထွက် လာ ခဲ့ ကြ ပြီး ကန် တော် ကြီး ဘက် ကို ကား ဖြင့် ပတ် မောင်း လာ ယင်း ၊ အ ရင် က နဲ ့မ တူ တော့ ဘူး ၊ ရှူ့ခင်း တွေ ကောင်း လာ သည် ဟု ဦး က ပြော ပြ ပါ သည်။ ဒီ နေ ရာ တွေ ဘက် ကို သ္မီး မ လာ မိ စေ နဲ ့ဟု တော့ ပြော ပါ သည် ။
ကျ မ က ဒီ လို နေ ရာ မျိုး အား လာ ဘို့ဆို တာ က စဉ်း စား လို ့တောင် ပင် မ ရ ပါ ၊ ဘု ရား ကို သာ ပုံ မှန် ရောက် နိုင် အောင် သာ အ မြဲ သွား သည် ဟု ဦး ကို ပြော ပြ မိ ပါ သည် ။ ကန် တော် ကြီး ဘက် က တော့ လူ ကြီး တွေ က လည်း ပေး မှ မ သွား တာ ၊ ကန့်သတ် နယ် မြေ ထဲ ပါ နေ သည် ။ ဦး စိတ် ပူ ပေး တာ ကျေး ဇူး ပါ ဘဲ ဟု ပြော မိ ပါ သည် ။
ကန် တော် ကြီး ကို နှစ် ပတ် လောက် မောင်း ပြ ယင်း ကန် တော် ကြီး ဟို တယ် မှာ ၊ ဦး က တ ရုတ် စာ မှာ ကျွေး ပါ သည်။
တ ရုတ် စာ က ပြော စ ရာ မ လို ၊ သ္မီး အ ကြိုက် ဟု ဦး က ထင် ပြီး သား ပါ ၊ နှစ် ကူး အိမ် ပြန် ဖြစ် သေး လား ဟု လည်း မေး ပါ သည် ။ ဦး က အ ဖေ့ ဆီ စာ ရေး ဆက် သွယ် ထား သည် ။
သ္မီး သိ ချင် လား ဟု ပြော ပါ သည်။ မ ကြာ မီ သ္မီး သိ ရ လိမ့် မှာ ပါ ဟု ဦး က ပြော ပါ သည် ။
ကန် တော် ကြီး မှာ ထ မင်း စား ခဲ့ ရ သည် မှာ ၊ တို့ ဂ ဏန်း ၊ ဆိတ် ဂ ဏန်း မျှ နှင့် သာ ပြီး ဆုံး သွား ပါ သည် ။ အိမ် က နှစ် ကူး လက် ရာ များ လောက် မ ကောင်း ဘူး လား ၊ မ တူ ဘူး လား ဟု ဦး က ဆို ပါ သည် ။
ကျ မ အား …
စား မ ကောင်း ဘူး လား…
လက် ရာ ညံ့ နေ လျှင် ပြော နော် …
အောက် က စီ စဉ် တာ တွေ ညံ့ ဖျင်း ရင် ပြော တော့ ပြော ရ မှာ ပဲ ၊ လုပ် ငန်း လုပ် တာ မ သေ သပ် ရင် တော့ အ သိ ပေး ရ မှာ ဟု ပြော ပါ သည် ။ ကျ မ က လည်း ကောင်း ပါ သည် မ စား နိုင် လို့ပါ ဟု ပြော လိုက် မိ ပါ သည် ။ ကိုယ့် ကြောင့် သူ များ ဒုက္ခ ရောက် မည့် ကိစ္စ မျိုး ကို တော့ အ တတ် နိုင် ဆုံး ရှောင် ကျဉ် ပါ သည်။
ကန် တော် ကြီး တွင် စား သောက် နေ စဉ် ၊ အ မျိုး က လှမ်း မြင် တွေ့သွား ပါ သည် ။ ဦး က လည်း ထိုင် ရာ မှ ချက် ခြင်း ဆို သ လို ပင် ခ ဏ နော် ဟု ဆို ခါ သွား တွေ့ပြီး ၊ ဘာ တွေ ပြော ကြား သည် ကို မ သိ ရ ပါ
ဦး က အ ရင် ပြန် လာ ပါ သည် ။ ခ ဏ မျှ ပင် မ ကြာ ပါ အ မျိုး က ထွက် လာ လျှင် ၊ ဦး က ပေါ် တင် မိတ် ဆက် ပေး ပါ တော့ သည် ။ အ မျိုး က ကျ မ အား ကြည့် ခါ ၊ အ ရမ်း ထွား လာ သည် ၊ ငါ့ ကို မှတ် မိ လား ဟု မေး ပါ သည် ။ ကျ မ မှ လည်း ထိုင် ရာ မှ ထ ပြီး နှုတ် ဆက် ရ မ လို လို ဖြစ် သွား ရ ပါ သည်။
ဦး ၏ အ မျိုး က ….
ကျ မ အား မြင် သည် နှင့် ပင်….
ထိုင် ပါ…..။ ထိုင် ပါ…..။ ထိုင် နေ လို့ရ ပါ တယ် ။
မ ထ ပါ နဲ ့…။ အား နာ ရ မည့် သူ တွေ မ ဟုတ် ဘူး ဟု ပြော ဆို ပါ သည် ။
မှတ် မိ လား ဟု လည်း ထပ် မံ မေး ပါ သည် ။
ကျ မ က…..
မှတ် မိ သ လို ပဲ ဟု ဖြေ လိုက် မိ ပါ သည် ။
ကျ မ အား ၊ အစ် မ ကြီး ကျယ် နှင့် တော့ တူ မည် မ ဟုတ် ဟု သ ဘော ထား ပါ ကြောင်း ၊ ယူ မည် ဆို ပါ က အသက် ကွာ ဟ မှု က ဘာ မျှ မ ဆိုင် ကြီး လျှင် မှီ ၊ ငယ် လျှင် ချီ ၊ ယော င်္ကျား ပဉ္စင်း မိန်း မ ပု ခက် တွင်း ဟု ပြော ပြီး ၎င်း အ နေ နှင့် က သ ဘော တူ သည် ဟု ဆို ပြီး ပြော ပါ သည်။ ဦး က အ ယင် သေ လျှင် တော့ သ္မီး က အ မွေ တွေ အ များ ကြီး ရ မှာ ဟု ပြော ဆို ပါ သည် ။ ၊ သူ့ဘက် မှ က ရား ရေ လွတ် တောက် လျှောက် ပြော ဆို ပြီး သည် နှင့် ကိ စ္စ ရှိ ၍ ဟု ဆို ခါ ချက် ခြင်း ဆို သ လို ပင် ထွက် သွား ခဲ့ ပါ တော့ သည် ။
ကျ မ က ရှင်း ပြ ချိန် ပင် မ ရ လိုက် ပါ ၊ အ မျိုး ပြော သ မျှ ကို သာ နား ထောင် လိုက် ရ ပါ တော့ သည် ။
ကဲ အ ခု သ္မီး ထင် နေ တာ နဲ့တ ခြား စီ မ ဟုတ် လား ဟု ပြော ပါ တော့ သည် ၊ ကျ မ က လည်း ဦး က စစ် ကူ တောင်း ပြီး ပြော ပြ ခိုင်း ထား တာ ကော ၊ မ ဖြစ် နိုင် ဘူး လား ဟု ပြော မိ ပါ သည် ။ ဦး က မ ပြော မ ဆို ပဲ တ ကယ် ချည် ပြီး တုတ် ပြီး လုပ် တာ တော့ မ ကောင်း ပါ ဘူး ဟု ပြော လိုက် မိ ပါ သည် ။
သ္မီး အ နေ နဲ ့က ဦး ကို အ လွန် စိတ် ဆိုး သည် ဟု ပြော လျှင်………………….
ကျ မ အား ပြော သည် မှာ …..
ဒီ ကိ စ္စ က လုပ် ကြံ ဖန် တီး တာ မ ဟုတ် ကြောင်း ၊ တိုက် ဆိုင် မှု တ ခု သာ ဖြစ် ပြီး ၊ ထန်း သီး ကြွေ ခိုက် ကျီး နင်း ခိုက် ဖြစ် သွား တာ ၊ သ္မီး မ ကျေ နပ် က ဦး ရှင်း ပြ လိုက် လို ့ရ သည် ၊ ဦး တောင်း ပန် သည် ဟု ပြော
ပါ တော့ သည် ။
ကျ မ က လည်း ၊ ဦး က ဘုန်း ကြီး ထိတ် ခေါက် ပြီး မှ တောင်း ပန် သ လို ဖြစ် နေ သည် ။ တော် ပါ ပြီ နောင် တွင် ဦး နဲ ့မ လိုက် တော့ ပါ ။ အ ထင် မြင် လွှဲ မှု ကို လည်း မ ခံ စား နိုင် ပါ ဟု ဦး ကို ပြော မိ လိုက် ပါ သည်။ အ ပြန် တွင် စ ကား ပြော အ ဆင် မ ပြေ လာ တော့ သ ဖြင့် ရေ ငုံ နှုတ် ပိတ် လုပ် ပြီး ပြန် လာ ခဲ့ ကြ ပါ သည် ။
ကျ မ နေ သည့် နေ ရာ သို့ဦး က ပြန် ပို့စဉ် အုတ် ခုံ ပေါ် စ ကား ခ ဏ နာ ရီ ဝက် လောက် ထိုင် ပြော ချင် သည် ။သ္မီး နား ထောင် ပေး နိုင် မှာ လား ဟု ပြော ပါ သည် ။
ကျ မ က စဉ်း စား ပြီး လျှင် ………
ရ ပါ သည် ၊ နား ထောင် ပေး ပါ မည် ဦး ဟု ဆို ပြီး ၊ ဦး ပြော သော စ ကား များ အား အုတ် ခုံ လေး ပေါ် တွင် ဦး နှင့် အ တူ တူ ထိုင် ပေး ယင်း နှင့် ပင် နား ထောင် ပေး နေ ခဲ့ မိ ပါ သည်။
ဦး ကဆို သည် မှာ ……
သ္မီး ဆီ ရောက် ပြီး ၊ စ ထွက် က တည်း က အ ဆင် မ ပြေ ၊ အ စ ကောင်း မှ အ နှောင်း သေ ချာဆို သ လို ပျော် စ ရာ မ ကောင်း ဟု ပြော ပါ သည် ။ ည က အိပ် ၍ ပင် မ ပျော် ၊ သ္မီး နှင့် အေး အေး ဆေး ဆေး လျှောက် လည် ချင် တာ ခု တော့ ပျော် စ ရာ မ ကောင်း ပဲ စိတ် ဆင်း ရဲ ရ တာ သာ အ ဖတ် တင် သည် ။
ဦး က သူ့ကိုယ် သူ ချစ် ကံ ခေ လွန်း သည့် သူ ဟု ပြော ဆို ပါ သည်။ အစ် မ ကြီး ကျယ် ကို လည်း ချစ် သည် ။ ဖူး စာ ရေး နတ် က မှင် ရေ ကြဲ သည် ။ သ္မီး ကို လည်း ညီ လေး ရင်း လို ပင် ချစ် ချင် သည့် စိတ် တ မျိုး လည်း ဖြစ် ပေါ် နေ မိ သည် ဟု ပြော ပြ ပါ သည် ။
အိမ် ထောင် မ ပြု ပဲ လည်း မ နေ ချင် ၊ ဘ ဝ ဟာ အ ထီး ကျန် ဆန် လွန်း သည် ။ ဘ ဝ ကို အ ဓိ ပ္ပါယ် ရှိ တာ နဲ့ပဲ အ ချိန် ကုန် ဆုံး ချင် သည် ။
လက် ထပ် ချင် သည့် ဆန္ဒ မ ရှိ လည်း သ္မီး ကို ယော င်္ကျား လေး လို ဝတ် ခိုင်း ပြီး ညီ လေး အ ဖြစ် မွေး စား ပြီး အ တူ တူ နေ ချင် မိ သည် ။ သ္မီး က တော့ သိ မည် မ ဟုတ် ပါ သ္မီး ယ ခင် က ယော င်္ကျား လေး လို ဝတ် ဆင် ပြီး နေ တဲ့ အ ချိန် မျက် စိ နဲ့တပ် အပ် မြင် ဘူး ထား သည် ။ အစ် မ ကြီး ကျယ် ကို စာ သင် ပေး နေ ခဲ့ တုံး က ၊ အစ် မ ကြီး ကျယ် က လည်း ပြော ပြ ထား ဘူး သည် ဟု ပြော ဆို ပါ သည်။
သ္မီး တို့မြို့ကို ကိစ္စ တ ခု နှင့် လာ ရောက် ခဲ့ စဉ် တုံး က ၊ ဘို ကေ ဆံ ပင် ရှပ် အ င်္ကျီ ဝတ် ဆင် ထား တာ တွေ့ရ သ ဖြင့် အစ် မ ကြီး ကျယ် ကို မောင် လေး လား ဟု ဦး က မေး ခဲ့ ဘူး မိ ပါ သည် ။ အစ် မ ကြီး ကျယ် ကိုယ် တိုင် က လည်း ညီ မ လေး ဖြစ် သည် ။
ယော င်္ကျား ရှာ စိတ် လို လို ၊ ဘာ လို လို ဘယ် လို ပုံ စံ ပေါက် နေ မှန်း ကို ပင် မ သိ ဟု ပြော ပြ ထား ဘူး သည် ဟု ဆို ပါ သည် ။ဘယ် သူ့ကို မျှ လည်း ၊ ပြန် မ ပြော ပြ ရန် နှုတ် ပိ တ် ခိုင်း ထား ဘူး သည် ဟု ပြော ပါ သည် ။
အစ် မ ကြီး ကျယ် နှင့် ဆို လျှင် သ္မီး အား သံ ယော ဇဉ် ဖြစ် လွန်း နေ ခဲ့ ရ မိ သည် ဟု ဦး က ဖွင့် ပြော ခဲ့ ပါ သည် ။ ဦး ပို့လိုက် တဲ့ ဓါတ် ပုံ လေး က သက် သေ ပါ ဘဲ ။ ဒီ တ ခေါက် ဦး ပြန် လျှင် ဓါတ် ပုံ ပါ ပြန် ထဲ့ ပေး လိုက် စေ ချင် သည် ဟု ပြော ပါ တော့ သည် ။
ကျ မ က လည်း ဦး ရဲ့လက် ဖ ဝါး ကို ကြည့် ချင် မိ ပါ သည် ဟု ပြော ဆို လျှင် ဦး က လက် ဖ ဝါး နှစ် ဖက် အား ဖြန့်ပြ ပါ သည် ။
ဦး ၏ လက် ဖ ဝါး အား ကျ မ မှ အ သေ အ ချာ ကိုင် တွယ် ကြည့် ရှူ့နေ မိ ခဲ့ ပါ သည် ။
ဦး က သ္မီး လက် ကို ဖမ်း ဆုတ် တော့ ရှက် ပြီး ရုတ် သည် ။
အ ခု တော့ ဦး ရဲ့လက် ဖ ဝါး ကို သေ ချာ ချာ ကိုင် တွယ် ပြီး ကြည့် နေ တာ ဘာ မှ မ ခံ စား ရ ဘူး လား ဟု ပြော ပါ တော့ သည် ။ ဦး ပြော သည့် စ ကား ကို ဘာ ပြန် ဖြေ ရ မှန်း ပင် မ သိ တော့ ပါ ။ ကျမ ထူ ပူ မိ သွား ရ ပါ သည်။
ကျ မ ၏ အ ရှိုက် ကို ထိုး နှက် သ လို ဖြစ် ခါ ၊ ရှက် သွား မိ ခဲ့ ရ ပါ သည် ။ ဒါ က ဝါ သ နာ မို့မေ့ ပြီး ကိုင် မိ တာ ပါ ဟု ဦး ကို ပြော လိုက် မိ ပါ သည် ။
ဦး က လည်း ….
ကျ မ အား …..
ခ ဏ လေး နော် ဟု ဆို ခါ ပြော ပြီး …
ကျ မ ၏ လက် ဖ ဝါး လေး နှစ် ဖက် ကို ရုတ် တ ရက် ဖမ်း ဆု တ် လိုက် ပြီး မှ ၊ တင်း တင်း လေး ကိုင် ထား ပြီး ၊ ဖြေး ဖြေး ခြင်း ဆွဲ လွှတ် လိုက် ပါ သည် ။ ပြီး လျှင် နောက် ဆုံး ဖြစ် ချင် လည်း ဖြစ် သွား နိုင် သည် ဟု ဆို ခါ ၊ ပ ဟေ ဠိ စ ကား လေး တ ခု အား ၊ ကျ မ ကို ပြော ကြား
လိုက် ပါ သည် ။
တကယ်တော့ တစ်ဘက်သတ် အချစ်ဟာ သနားစရာပါဘဲ။
ချစ်တိုင်းလဲ မညား၊ ညားတိုင်းလဲ မချစ် ဆိုတာနဲ့ များ အစ်မကြုံ ခဲ့ရပြီလား။
စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းနေမိတယ်။
ပင်လယ်ထဲမှာလည်း မိုးသက်မုန်တိုင်းများကင်းစင်လို့ နေပါစေ…
ဘယ်တော့များမှ … ပြန်ပေတော့ မစဉ်းစားနဲ့ ပြန်ပေတော့လို့ .. သီချင်းဆိုပြီး ပြောလွှတ်လိုက်မလဲ … တွေးတွေးပြီးရင်မောရပါတယ် … ။
ဒါဆို အန်ကယ်ကြီးက …
ချစ်တိုင်းလည်း မညား ……… စကားကိုသာ ……… တီးတိုးရေရွတ်မိတယ် ….. ဆိုပြီး ပြန်ဆိုလိမ့်မယ် … ဟိ
အန်တီအေးရေ ..ပြောမယ့်သာပြောတာ ဒီလူကြီးကို သိပ်မယုံချင်ဘူး … ။ ကမာ္ဘလဆန်း တရက်နေ့ထိစောင့်မယ် ဘာညာသာပြောတာ … တကယ်တမ်း သူ့အချစ်က ရွေ့ပြောင်းလို့ ရသလိုမျိုးကြီးရယ် .. သူလို ရယ်ဒီမိတ်က .. ဒီအချိန်မှာ .. အဖြူရောင်ကောင်မလေးဆီက ဘာသာယာမှုမရပဲ … မျှော်လင့်တကြီးစောင့်နေတာကတော့ …. သိပ်မရိုးဘူးလို့ထင်တယ် … ။ သူတို့လို အရွယ်တွေ ၊ သူတို့လို ငွေကြေးရှာနိုင်တဲ့အခါ အပြင်မှာတော့ ရှုပ်တတ်ဇယားခင်းတတ်ကြတာမို့ပါ … ။
စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ ဖတ်နေတာ ဘာမှတောင် ဝင်မပြောနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ဇာတ်လမ်းက ကြိုမမြင်ရဘူး။ ဖြစ်ရပ်မှန်လားဟင်…
၁ ကနေ ရ ထိ word file နဲ့ကူးထားပါတယ် အမအေးရေ။ ဇာတ်သိမ်းမှစုဖတ်မလို့မဖတ်သေးပါဘူး။
ကန်တော်ကြီးထမင်းစားတော့ တို့ကနန်း နဲ့ ဆိတ်ကနန်း ဟင်းနှစ်ပွဲဘဲမှာစားတာလားဟင်။
ဦး က အမေအေးကို ပြောသွားတဲ့ ပဟေဋ္ဌိလေးကတော့
“ ပင်လယ် ဓါးပြ ” ပါတဲ့
အမအေး ဘယ်လို ပြန်ဖြေခဲ့သလို ဆိုတာ ဆက်စောင့်ဖတ်မယ်ဗျား။
လက်ဖဝါးမှာ နှလုံးလမ်းကြောင်း ကျွန်းခံနေတာ မတွေ့ခဲ့ဘူးလား အန်တီ.. အရှေ့က လူနဲ့ သေချာပြီ ထင်ခဲ့ပေမဲ့ ကွဲ သွားတယ်။
နောက်က လူကလည်း သိပ်မရေမရာ ဆိုတော့.. တွေးမိတာ ပြောကြည့်တာပါ။